Ukubuka kwe-Beach Skybox-panoramic, ukuzwa, ukuzwa ulwandle.
I-i-condominium (condo) ephelele ibungazwe ngu-Ambrose
I-Beach Skybox - Ukubuka kwe-Panoramic nokuseduze kosebe lolwandle nolwandle. Ungabona, uzwe futhi uzwe ulwandle nolwandle. I-balcony yethu yesitezi sesithathu inombono omuhle kakhulu wolwandle kanye ne-Atlantic Ocean esiqhingini. Ungakwazi ukubuka ukuphuma kwelanga embhedeni kasofa futhi ubuke inyanga phezu kolwandle ebusuku. I-condo yethu ivuselelwe futhi yahlanzwa ngaphakathi ngaphandle ngemishini emisha futhi iningi lazo lishintshiwe. Sihlinzeka ngendawo yokuhlala enethezekile yeholide enombono omuhle nomuzwa wolwandle nolwandle.
I-"Beach Skybox" ihlinzeka ngokubuka okumangalisayo kwe-panoramic yolwandle nolwandle. Ukubona, umsindo nokuzwakala kumane kukuhle esiqhingini. Ungakwazi ukujabulela futhi uzwe izimo ezingaqondakali nezishintshayo njalo zolwandle nolwandle nganoma yisiphi isikhathi sosuku nakuzo zonke izinkathi zonyaka. Yonke into ekwi-condo yakhelwe ngokuzungeza le ndawo emangalisayo. Sizama ukukunikeza i-condo enethezekile, ehlonyiswe kahle futhi ehlotshiswe ngeholide lakho futhi sisebenze uma kunesidingo. Silungele amaholide onyaka wonke kumbhangqwana noma umndeni omncane.
Umbhede wendlovukazi egumbini lokulala, usofa wendlovukazi kanye nemibhede emikhulu (76" x 24") inikeza umthamo wabantu abadala abangu-4 nezingane ezi-2. Kodwa ikhululekile kakhulu kubantu abangu-2 kuya kwabangu-4. Ama-Beachfront Condos mancane. Ngakho-ke, sicela uhlele ngokufanele.
Ukuze uphephe, i-condo ihlanzwa kahle, ihlanzwa futhi i-ozonized ngaphambi kokufika kwakho. I-ozone ayihambisani nemvelo, yenziwe ngomoya-mpilo. Ibulala amagciwane namagciwane kuyo yonke i-condo kuhlanganise ne-ductwork. Ibola ibuyele kumoya-mpilo emva kwalokho. Sine-air purifier ene-plasma wave yokubulala amagciwane kanye nesihlungi se-HEPA sokususa uthuli, impova, amagciwane, amagciwane nezinye izinto ezivamile ezingcolisa umoya. I-dehumidifier yehlisa umswakamo wangaphakathi ukuze ukhululeke. Iphampu yokushisa inesevisi futhi i-ductwork ihlanzwa kahle. I-thermostat ye-EcoBee entsha isiza ukulawula izinga lokushisa nomswakama. Sicela ugcine iminyango ivaliwe futhi uthulule ithangi le-dehumidifier uma seligcwele. Lokhu kuphephe futhi kunethezekile ngendlela engikwazi ngayo njengosokhemisi. Njengosokhemisi, ngiyabuqonda ubungozi bamakhemikhali kubantu. Angisebenzisi amakhemikhali kalula. Isibonelo, angizisebenzisi izibulala-zinambuzane endlini naseduze kwendlu yami. Ukugcina indlu ihlanzekile futhi usebenzise izicupho njengoba kudingeka umsebenzi omkhulu.
Ukuze uthole ukuzijabulisa kwakho, sinama-Samsung UHD TV amasha angu-58” kanye nama-32” afakwe ikhebula le-HD lendawo futhi asakazwa nge-YouTube TV kanye ne-Amazon Prime Videos. Sihlinzeka nge-inthanethi enesivinini esikhulu ku-300/30 mbps.
Sihlinzeka ngamathawula ephepha, iphepha lasendlini yangasese, insipho, okokugeza izitsha kanye nomshini wokuwasha izitsha ovame ukuhlala isonto lonke. Sihlinzeka ngezinsiza eziningi zasekhishini. Sihlinzeka ngamathawula wekhwalithi namalineni.
Kudinga isikhala esiningi, umsebenzi kanye nomzamo wokuletha imishini yakho yasebhishi ikakhulukazi ukusuka kude. Ukuze kube lula kuwe, izihlalo zasolwandle (5), izihlalo zolwandle ze-Hi-Boy (1), izambulela(3), inqola yolwandle (1) kanye namathoyizi olwandle kanye nama-pool. Letha izinto zakho zasolwandle ozithandayo noma usebenzise ezethu. Kodwa phatha awakho amathawula olwandle.
Itafula lokudlela/lehhovisi kanye nezihlalo/izihlalo ziyakwazi ukulungiseka ubude ukuze ubuke ubhishi nolwandle ngenkathi udla noma usebenza. Kuvulandi, sinezihlalo ezigoqekayo zobude bekhawunta, izihlalo ezigoqayo ezivamile kanye netafula eligoqayo lolwandle lwakho nolwazi lwasolwandle. Sinezibuyekezo eziningi ezihlanganisa yonke ifenisha entsha, umbhede wendlovukazi, i-vinyl flooring kanokusho, okuyize, indlu yangasese, izinto zasendlini yangasese, isiqandisi, umshini wokugeza izitsha, i-microwave, amabhodwe ekhofi, izitsha, izitsha nezinto zokupheka. Sashintsha zonke izindawo zikagesi, safaka inhlanganisela entsha nezingidi zebhawodi ezifile emnyango wokungena kanye nehardware entsha kuyo yonke eminye iminyango. Izinzwa zokuvuza kwamanzi zivikela i-condo ekulimaleni okungaba khona kwamanzi. Sicela ugcine isamukeli se-WiFi sixhunyiwe.
Kudinga isikhala esiningi, umsebenzi kanye nomzamo wokuletha imishini yakho yasebhishi ikakhulukazi ukusuka kude. Ukuze kube lula kuwe, izihlalo zasolwandle (5), izihlalo zasolwandle ze-Hi-Boy (1), izambulela(4), inqola yolwandle (1) kanye namathoyizi athile olwandle kanye nama-pool. Letha izinto zakho zasolwandle ozithandayo noma usebenzise ezethu. Kodwa phatha awakho amathawula olwandle.
Uma udinga ukusebenzela ekhaya noma ogwini, ihhovisi lasekhaya lingasethwa libe netafula lokudlela/elinobude obulungisekayo noma libe netafula eligoqayo elingu-48” x 24” (24”, 30” noma 35”) eligoqayo. I-inthanethi enesivinini esikhulu ku-300/30 mbps iyatholakala. Iphrinta/isikena se-HP laser jet B/W siyatholakala. Ungasebenzisa ama-TV ayisipele amabili njengamamonitha noma ama-Samsung TV amabili njengamamonitha.
I-HDTV engu-58" ene- I-Amazon Prime Video, Isevisi evamile ye-cable kamabonakude
4.92 ·25 okushiwo abanye
Kunezindawo zokudlela ezitholakala endaweni yokungcebeleka ezizoletha ngisho naku-condo yakho. Kukhona indawo yokuphuzela utshwala/indawo yokudlela/u-ayisikhilimu eduze kwechibi. Ezinye zezindawo zethu zokudlela esizikhonzile i-Poseidon, i-Frankie Bones, i-Jane’s Bistro, indawo yokudlela yasemanzini e-Old Oyster Factory eshona exhaphozini, i-Sea Shack, i-Bullies Barbecue kanye ne-Giuseppi's Pizza. Ikhishi likaSerg lilungele ukudla okuqandisiwe nokudla okusha kwansuku zonke okusele. Sijabulela ukudla kokushona kwelanga e-Skullcreek Boathouse nase-Skullcreek Dockside lapho kubonwa khona izilwane zasendle ezinjengezingwenya, izingwenya nama-cranes. I-Thai Smile, i-Longhorn Steakhouse, i-Jim and Nick's Barbecue kanye ne-Panda Chinese Restaurant e-Bluffton izindawo ezinhle zokuma lapho uya e-HHI noma uma uyothenga ezweni elikhulu. I-Panda to go ukudla kwethu kwamaShayina esikuthanda kakhulu okunezingxenye ezinkulu kakhulu.
Sizama ukunikeza izivakashi zethu imininingwane nge-condo yethu, indawo yokuvakasha kanye nokuvakasha. Sizama ukuphendula yonke imibuzo ngokushesha ngokuvamile phakathi nehora. Sizama ukungaphazamisi izivakashi zethu ngokuxhumana okungadingekile ngesikhathi sokuhlala kwazo. Nokho, simi ngo-24/7 ukuze siphendule noma yimiphi imibuzo futhi sinakekele noma yini engavela. Nakuba sifuna ukwenza isiqiniseko sokunakekela izivakashi zethu futhi sithande ukwazi okwengeziwe ngazo, siyaqaphela ukuthi ezinye izihambeli ziyimfihlo kakhulu futhi ngeke siziphazamise kungenasidingo.
Sizama ukunikeza izivakashi zethu imininingwane nge-condo yethu, indawo yokuvakasha kanye nokuvakasha. Sizama ukuphendula yonke imibuzo ngokushesha ngokuvamile phakathi nehora. Siz…
UAmbrose Ungumbungazi ovelele